မျိုးရိုးဗီဇပြန်ကြားရေးကြှနျုပျတို့ကိုရောဂါများအတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အန္တရာယ်များကိုသဘောပေါက်နားလည်ခြင်းကိုကူညီပါနိုငျ - သတင်း Rule
မျိုးဗီဇမျိုးကွဲရောဂါဇီဝစွန့်ခန့်မှန်း, ဒါပေမဲ့သူတို့လည်း heritable အပြုအမူအန္တရာယ်အချက်များအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်စေခြင်းငှါ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “မျိုးဗီဇသတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ကိုရောဂါများအတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အန္တရာယ်များကိုနားလည်ကူညီပေးနိုငျ” Suzy Gage ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 22 ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 13.16 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သင်တစ်ဦးရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းမျိုးဗီဇ၏နံပါတ်ရှိပါသည်ကြောင့်ဟုဆိုကာဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရတဲ့အခါ, များသောအားဖြင့်ဤအချက်အလက်ထံမှလာ မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်အသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများ (GWAS). ဤရွေ့ကားအယူအဆ-အခမဲ့ဆန်းစစ်လူမျိုး၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုသုံး, နှင့်မျိုးရိုးဗီဇကိုဖြတ်ပြီးနေရာများတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏များစွာသောရာပေါင်းများစွာမှာရောဂါနှင့်မျိုးရိုးဗီဇမူကွဲအကြားအသင်းအဖွဲ့များကိုရှာ.
သို့သော်ရှိပါတယ် သိ. 108 အပါအဝငျကသူနဲ့ဆက်စပ်မျိုးရိုးဗီဇနေရာများ သင်တို့သည်ဤမျိုးရိုးဗီဇမျိုးကွဲအမှန်တကယ်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသိမဟုတ်လျှင်သေချာပေါက်ကြောင်းအသုံးဝင်သောမဟုတ်ပါဘူး. GWAS သုတေသန tool ကိုဖြစ်ကြသည်, ကျွန်တော်တို့ကိုရောဂါနားလည်လာအောင်ကူညီပေးတဲ့လမ်း. တစျခါတကပရိုတိန်းတစ်ခုမူကွဲ codes တွေကိုသိရမယ့်, ပြီးတော့ကမျိုးဗီဇ၏ function ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်, ဒါပေမဲ့ယခုအချိန်တွင်မျိုးဗီဇမျိုးကွဲတွေအများကြီး၏ဇီဝ function ကိုကိုယ့်ကိုမသိရသည်, သုတေသန tool အဖြစ် GWAS ၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်.
ဒါဟာ GWAS အားဖြင့်ဖော်ထုတ်မျိုးဗီဇမျိုးကွဲတိုက်ရိုက်ကိုယ်စားပြုယူဆခဲ့, ဇီဝရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ - ကို "သဘာဝ" အစားထက်အန္တရာယ်၏ "ပွား" အဆုံး. ငါ့အလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်ငါမကြာသေးမီကများ စက္ကူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ကျနော်တို့ရလဒ်များကိုအတွင်းပါရှိသောထက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုထားတဲ့အတွက်.
အဆုတ်ကင်ဆာတစ် GWAS ကောက်ယူခဲ့သည့်အခါ, ပြင်းပြင်းထန်ထန်အဆုတ်ကင်ဆာနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးတစျခုမျိုးရိုးဗီဇမူကွဲခရိုမိုဆုန်း၏ဧရိယာအတွင်းတည်ရှိပြီးတစ်ဦးဟုလူသိများမူကွဲခဲ့သည် 15 "အနီကိုတင်း acetylcholine ဗီဇအဲဒီ receptor စပျစ်သီးပြွတ်" ဟုခေါ်. ဒီမူကွဲတစ်နေ့လျှင်သောက်သည်အစီးကရက်အရေအတွက်နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသထားပါတယ်, ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူကလူအတွက်. ကမျိုးရိုးဗီဇလည်းလွတ်လပ်စွာအဆုတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသောအမှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, စဉ်တွင်, အဖြစ်ကောင်းစွာဆေးလိပ်၏၌လည်းညှိုးငယ်ခြင်းအဖြစ်, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကအဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်စေသည်ကွောငျ့ဒီမူကွဲအဆုတ်ကင်ဆာများအတွက် GWAS အတွက်ဖော်ထုတ်ကြောင်း ပို. ဖွယ်ရှိပုံရသည်.
အခြားကောင်းသောဥပမာအရက်စာပေထဲမှာရှိပါတယ်. တစ်ဦးကမျိုးရိုးဗီဇမူကွဲအရက်သောက်ခန့်မှန်းကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့. ဒါဟာ Non-အဆိပ်သင့်သောသူတို့ကိုသို့အရက်၏အဆိပ်အတောက် metabolites ဆင်းချိုးတဲ့ပရိုတိန်းသည်အ codes တွေကို. သင်ဤပရိုတိန်း၏အများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, အဆိပ်၏အဆင့်ဆင့်ကိုတက်ဆောကျနိုငျ, သငျသညျနေမကောင်းခံစားရစေနှင့်မှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်. အဆိုပါမူကွဲဥရောပလူဦးရေအတွက်အလွန်ဘုံမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမဲ့အရှေ့အာရှမျိုးရိုး၏လူဦးရေမှာပိုပြီးအဖြစ်များဖြစ်ပါသည်. ဤအုပ်စုထဲမှာ, မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား၏ GWAS ဒီအထူးသဖြင့်အရက်နှင့်ဆက်နွယ် genotype ဖော်ထုတ်. သို့သော်ထိုသို့ဥရောပလူဦးရေအတွက်သွေးဖိအား GWAS အတွက်မမြင်င်. ဒီအရက်သုံးစွဲမှုမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, မျှမျှတတခိုင်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်.
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်တခုစိတ်ဝင်စားစရာအတွေးမှဦးဆောင်: ဖြစ်ကောင်း, အဖြစ်ကောင်းစွာသကဲ့သို့ငါတို့သည်ပြီးသားသိကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အသင်းအဖွဲ့များအတည်ပြု (ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အဆုတ်ကင်ဆာများကဲ့သို့), ဒါကြောင့်ရောဂါများအတွက်အခြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အန္တရာယ်အချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီစေခြင်းငှါ,. ဥပမာအားဖြင့်, တူညီတဲ့ဆေးလိပ်သောက်မူကွဲလည်းအပါအဝငျကတစ်ဦးမကြာသေးခင်က GWAS အတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ် - ဒီဆေးလိပ်တစ်ကြောင်းဆိုလိုစေခြင်းငှါ, ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အန္တရာယ်အချက်တစ်ချက် ရောဂါများအတွက်? ဖြစ်နိုင်အောင်, နောက်ထပ်စမ်းသပ်ဒီအတည်ပြုဖို့လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်, ၎င်း၏ဆဲတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းဤမျိုးရိုးဗီဇဗိသုကာပညာမျှဝေနိုင်.
အခုအချိန်မှာ, ဒီလမ်းအတွက် GWAS ပြန်ဆိုအတွက်အဓိကန့်အသတ်ဖော်ထုတ် ပြင်ဆင်. အန္တရာယ်အချက်များ၏အလွန်များစွာသောမျိုးဗီဇခန့်မှန်းရှိနေကြသည်မဟုတ်ကြောင်း. ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်. ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုမှာအနည်းဆုံးတစိတ်တပိုင်း heritable ကြောင်းသိ, တစ်ဦးမျိုးရိုးဗီဇအစိတ်အပိုင်းလည်းမရှိအကြံပြုခြင်း, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မရှိသေးပါမျိုးကွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ. ဤအမျိုးကွဲကိုတွေ့ခံ Start သောအခါ,, GWAS အတွက်သတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ကိုအထိဖွင့်လှစ်စေခြင်းငှါ.
အဘယျကွောငျ့ဤအအသုံးဝင်သည်? ကောင်းစွာ, သူတို့မျိုးရိုးဗီဇကိုပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထက်ကလူကသူတို့ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲကိုကူညီအများကြီးပိုလွယ်င်!
29570	5 အရက်, အပိုဒ်, ဇီဝဗေဒ, မျိုးရိုးဗီဇ, သိပ္ပံ, သိပ္ပံဘလော့ဂ်ကွန်ယက်ကို, အထောက်အထား Sifting, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, Suzy Gage
← Samsung ရဲ့ Galaxy S7 နှင့် S7 Edge ရေစိုခံစမတ်ဖုန်း အဆိုပါအများစုမှာလတ်တလောရူးသွပ်နည်းပညာနှင့်တီထွင် [VIDEO] →